Famonosana entana - Delta Engineering Belzika
Alarobia 08 aprily 2020 by Cristina Maria Sunea
Masinina fitetezana milina
Ity masinina fitehirizana kitapo ity dia singa iray tena mifangaro, izay mifanentana ao ambadiky ny kitapo voatondro. Manaiky kitapo avy ao anaty boaty ary mamadika ireo ho ambony. Manana toerana mametraka zavatra maro izy io. Manavotra amin'ny asa sy ny habaka.
Published in Famonosana kitapo
Notsongaina ambany: bagging, kitapo fatotra, Space saving